3 Siyaabaha Undelete Faylal ay ku iPhone
Mararka qaar marka aad fasax xabsi ama aad kor u iPhone, waxaa laga yaabaa in shil ama ula kac ahayn tirtirto dhammaan faylasha. Oo waxaa had iyo jeer dhacda in carruurtaada kaliya tirtirto barnaamijyadooda qaar ka mid ah ama fariimaha qoraalka ah, xitaa xiriirada aad iPhone markii ciyaaro aad iPhone. Mar kasta oo ay tani dhacdo, ha niyad ahaan. Waxaad undelete karo files kuwaas oo aad iPhone. Fiiri warbixinta.
Your iPhone iyo cable digital;
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa software aduunka ee soo kabashada xogta ugu horeysay ee iPhone. Waa qalab desktop ah. Waxaad u isticmaali kartaa in xiriir undelete, fariimaha qoraalka ah, sawiro, qoraalo, jadwalka, et. on your iPhone. Waxay bixisaa 3 hababka ay u undelete files on iPhone:
Mode 1: Undelete gudbiyo si toos ah iPhone
Mode 2: files Undelete kaga imaanayo Lugood haddii aad files kuwaas oo aan xoojiyaa in Lugood
Mode 3: Undelete files ka iCloud gurmad gurmad haddii aad files kuwaas oo aan xoojiyaa si iCloud
iPhone Data Recovery - Undelete Faylal ay ku iPhone
Photos Undelete iPhone, fariimaha qoraalka ah, xiriirada, qoraalo, jadwalka, iyo qaar kale;
3 hababka la heli karo si files undelete ka iPhone: on iPhone, ka gurmad Lugood iyo gurmad iCloud;
Easy in ay isticmaalaan, xirmaan iPhone> iskaan iPhone> undelete xulay files
Taageerayaan iPhone: 6s iPhone (daray), 6 (daray), 5s, 5c iPhone, iPhone 4s, iyo in ka badan >>
Tallaabada 1 Connect aad iPhone la your computer
Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer. Waxaa Launch iyo xiriiriyaan iPhone si aad u computer via cable USB ah. Ka dib markaas, waxaad ka arki kartaa barnaamijka si toos ah ogaadaa aad iPhone.
Tallaabada 2 Scan for files tirtiray
Guji "Start Scan" si aynu barnaamijkan si ay baarista iPhone for files tirtiray. Dhinaca sare ee barnaamijka, waxaad ka arki kartaa ikhtiyaarka "Kaliya bandhigaan waxyaabaha la tirtiro". Dadban fursad u ON.
Tallaabada 3 Undelete files on iPhone
Waxaa laga yaabaa inay qaataan dhowr daqiiqo dhammayn habkan. Waxay ku xiran tahay xaddiga faylasha aad tirtiray. Ka dib markaas, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha tirtiray waxaa lagu kala soocaa galay category. Waxaad riix kartaa wax u dhigma galeeysid ka tagay si uu u hubiyo ka soo faylasha aad. Dooro files tirtiray oo guji Ladnaansho si ay u undelete.
Mode 2: files Undelete kaga imaanayo Lugood
Tallaabada 1 Download gurmad Lugood faylka xaq u
Kadib markii ay Wondershare Dr.Fone ee macruufka, guji "kabsado Lugood ee kaabta File". Ka dibna waxaa lagu soo bandhigi doonaa oo dhan Lugood gurmad files. Dooro mid ka mid ah ay ku jiraan faylasha aad tirtiray aad iPhone inaad kala soo baxdo.
Tallaabada 2 Warbixiinta files tirtiray kaga imaanayo Lugood
Ka dib markii ay soo degsado Lugood gurmad file, ha Wondershare Dr.Fone ee macruufka Macdan faylka gurmad. Later aad ka arki kartaa dhammaan faylasha ah waxaa lagu kala soocaa galay category. Raadi faylasha tirtiray oo guji Ladnaansho si ay u undelete.
Mode 3: files Undelete kaga imaanayo iCloud
Tallaabada 1 Download file gurmad iCloud
Daahfurka Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo guji ikhtiyaarka "kabsado iCloud File kaabta" on sare ee barnaamijka. Log in la xisaabtaada iCloud. Barnaamijkan marnaba ururinaa macluumaadkaaga shakhsiga ah, laakiin ha waxaad kala soo bixi iCloud gurmad file. Dooro iCloud gurmad file saxda ah inaad kala soo baxdo.
Tallaabada 2 Undelete files kaga imaanayo iCloud
Riix "Scan" badhanka si ha laga soosaaray barnaamijka iCloud gurmad faylka. Later, waxaad ka heli kartaa files tirtiray aad iPhone. Dooro kuwa doonayay oo guji Ladnaansho in undelete files ka iPhone.
Sida loo soo ceshano tirtiray Xusuusin on iPhone
> Resource > iPhone > Sida loo Undelete Faylal ay ku iPhone